Iindaba -Ukukhusela kunye nokugcinwa kwezixhobo zeefilitha
Amanyathelo okhuseleko kunye nokugcina ukusetyenziswa kwezixhobo zecebo lokucoca ulwelo: Phambi kokuba usebenzise isixhobo sokucoca intsimbi esingenasici, kufuneka ujonge ukuba izincedisi kunye nemisesane yokutywina iphelele na nokuba yonakele na, emva koko uyifake njengoko kufuneka njalo.
Icebo lokucoca ulwelo elitsha kufuneka licocwe ngesicoci (nceda ungasebenzisi ukucoca iasidi). Emva kokuhlamba, sebenzisa umphunga obushushu obuphezulu ukubulala iintsholongwane, ukubulala iintsholongwane, nokucoca isihluzi ukunqanda ungcoliseko.
Xa ufaka icebo lokucoca ulwelo, musa ukuqhagamshela i-inlet kunye ne-outlet ngokuchaseneyo. Izibuko kwicala lesitya esisezantsi sokucoca umbhobho yindawo engena engamanzi, kwaye umbhobho odityaniswe kwisiseko sefilitha yindawo ecocekileyo yolwelo.
Into entsha kukuba umenzi makangazikrazuli iiplastiki ukuba zifakwe kwisingxobo seplastiki kwindawo yemveliso ecocekileyo. Sebenzisa isihluzi esifuna ngakumbi kwaye uhambe kubushushu obuphezulu benzala emva kofakelo.
Xa ufaka into yecebo lokucoca ulwelo ekuvuleni, isihluzi kufuneka sibe nkqo. Emva kokufaka ukuvulwa, ipleyiti yoxinzelelo ibopha amaphiko encam, emva koko uqinise izikrufu kwaye ungashukumi. Emva kokungena kwesihluzi se-interface engama-226, kufuneka ijikelezwe ngama-90 degrees kwaye ibambe. Esi sisitshixo kufakelo. Ukuba awulumkanga, itywina alizukufezekiswa, kwaye ukuvuza kwamanzi kuya kuba lula, kwaye neemfuno zokusetyenziswa azizukufezekiswa.
Isilinganisi soxinzelelo lwesilinda sisalathisi soxinzelelo lwamanzi. Ukuba sisihluzi sesibini, kuyinto eqhelekileyo ukuba isalathiso somlinganiso wokuqala wefilitha esincinci. Ixesha elide lokusetyenziswa, uxinzelelo luya kunyuka kwaye inqanaba lokuhamba liya kuncipha, oko kuthetha ukuba uninzi lwezikhewu zokucoca ulwelo ukuba zivaliwe, gungxula okanye ungene endaweni yento entsha yecebo lokucoca ulwelo.
Xa ucoca ulwelo, uxinzelelo olusetyenzisiweyo ngokubanzi malunga ne-0.1MPa, enokuhlangabezana neemfuno zemveliso. Ngokunyuka kwexesha kunye nokuhamba, ii-micropores zento yokucoca ziya kuvalwa kwaye uxinzelelo luya kunyuka. Ngokubanzi, akufuneki idlule kwi-0.4MPa. Ixabiso eliphezulu alivunyelwe. Ngaphezulu kwe0.6MPa. Ngaphandle koko iya konakalisa isixhobo sokucoca ulwelo okanye ugqobhoze. Unonophelo olulodwa kufuneka lwenziwe xa kusetyenziswa iifilitha ezichanekileyo.
Xa imveliso igqityiwe, zama ukukhupha ifiltrate kangangoko kunokwenzeka. Ixesha lokuphumla alikho lide. Ngokubanzi, sukuvula umatshini, sukukhupha isixhobo sokucoca ulwelo, okanye ugcine i-filtrate ubusuku bonke. Into yecebo lokucoca ulwelo kunye necebo lokucoca ulwelo kufuneka licocwe xa umatshini umisiwe (indlela yokubuyisela kwakhona inokusetyenziswa).
Ukusetyenziswa kokuthelekisa okukhethiweyo, nikela ingqalelo kukuhamba okufunekayo, uxinzelelo, intloko yokumpompa ukutshatisa, ukhetho ngokubanzi lulungele iimpompo ze-vortex, iimpompo zokumnika, njl., Iimpompo ze-centrifugal azisebenzi.
Indlela yokugcina izixhobo zokuhluza
Ukuba isihluzo asisetyenziswanga ixesha elide, isihluzi kufuneka sicocwe, isihluzi kufuneka sisuswe, sihlanjwe kwaye somiswe, sitywinwe ngengxowa yeplastiki ukuthintela ungcoliseko, kwaye isihluzi kufuneka sisulwe kwaye sigcinwe ngaphandle komonakalo.
Isixhobo sefilitha esitshintshiweyo kufuneka sifakwe kwi-acid-base lotion ngaphezulu kweeyure ezingama-24. Iqondo lobushushu lesisombululo esine-asidi ngokubanzi ngama-25 ℃ -50 ℃. Kuyacetyiswa ukuba umlinganiselo we-asidi okanye i-alkali emanzini yi-10-20%. Isihluzi kunye nesihluzi esinomxholo weprotini ephezulu kulunge kakhulu ukuba sifakwe kwisisombululo se-enzyme, kwaye umphumo wokucoca ulungile. Ukuba iyahlaziywa, kufuneka icocwe kwaye emva koko yenziwe inzalo ngomphunga. Ukucoca kunye nokubulala iintsholongwane kubaluleke kakhulu kwiifilitha zamanzi nakwizomisi zokucoca ulwelo.
Xa kucocwa into yecebo lokucoca uliso, nika ingqalelo ixesha kunye neqondo lobushushu. Kufanelekile ukusebenzisa i-121 ℃ ye-polypropylene kwikhabhinethi enobushushu be-disinfection, kwaye usebenzise umphunga wokucoca inzalo kuxinzelelo lwe-0.1MPa kunye ne-130 ℃ / imizuzu engama-20. Kufanelekile ukuba polysulfone kunye polytetrafluoroethylene. Ukucocwa kwe-Steam kunokufikelela kwi-142 ℃, uxinzelelo lwe-0.2MPa, kwaye ixesha elifanelekileyo limalunga nemizuzu engama-30. Ukuba iqondo lobushushu liphezulu kakhulu, ixesha lide kakhulu, kwaye uxinzelelo luphezulu kakhulu, isixhobo sokucoca ulonakaliso.